Antso ho an’ny mpandraharaha : tsy tokony hividy lavanila tsy matoy | NewsMada
Antso ho an’ny mpandraharaha : tsy tokony hividy lavanila tsy matoy
Tapa-kevitra ny hanavotra ny vokatra lavanila ny any Maroantsetra, faritra Analanjirofo. Nivory tany Maroantsetra, omaly niaraka tamin’ny mpamokatra any an-toerana, ny Vondrona nasionaly mpamokatra lavanila (PNV) tarihin’ny filohany, Zakaria Nesthor, namariparitra ny amin’ny hamerenana, araka ny tokony ho izy, ny kalitaon’ny lavanila. Fantatra fa noho ny halatra lavanila mbola tsy matoy no manimba ny kalitaon’io vokatra io, tsy mahampy ny “taux de vanilline”, araka ny fenitra takina eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Mbola tsy tonga ny fotoam-piotazana, efa betsaka ny voaongotra amin’ny fotony lasan’ny mpangalatra. Koa nanao antso avo manokana amin’ireo mpandraharaha ny PNV, mba tsy hividy ireny lavanila tsy matoy ireny, manjary manimba tsena.
Manjaka ny tsy fandriampahalemana any an-toerana, efa taona maro izao. Nantsoina nandray anjara tamin’ny fivoriana ny mpitandro filaminana any amin’ny faritra hijery akaiky ny momba ity raharaha ity. Miantso ny mpamboly ny PNV hiditra anaty fikambanana any an-toerana, hamolavola ny dina miaraka amin’ny faritra, sampandraharahan’ny varotra sy fambolena. Dina atao indrindra hiadiana amin’ny halatra.
Ankoatra izany, ezahina ny hanatsarana ara-teknika ny voly. Very, ankehitriny, ny toeran’i Madagasikara amin’ny maha mpamokatra voalohany lavanila azy. Tsy ampy betsaka ny vokatra amin’izao fotoana izao. Nisy teo amin’ny 2.300 t tamin’ny taona 2014, an-tsasany sisa izany raha be indrindra, ny taona 2015 teo. Noho izay tsy fahampian’ny vokatra izay, tafakatra ambony ny vidiny eto an-toerana. 500.000 Ar ny kilao ankehitriny, ho an’ireo aondrana any ivelany.